ETU IBUDATA EGWU NA KAADỊ EBE NCHEKWA - KAADỊ EBE NCHEKWA - 2019
Adobe Flash Player bụ otu n'ime plug-ins kachasị amara nke na-enye ọdịnaya Flash na Intaneti. Taa, anyị ga-ekwu banyere otu esi hazie ihe mgbakwunye a na Yandex Browser.
Ịhazi Flash Player na Yandex Nchọgharị
Ejikwala Yowerx gbanye Flash Player ngwa mgbakwunye n'ime ihe nchọgharị weebụ, nke pụtara na ịkwesighi ibudata ya iche iche - ị nwere ike ịga ogologo iji dozie ya.
Mbụ anyị kwesịrị ịga na mpaghara ntọala Yandex. Nchọgharị, nke ọnọdụ Flash Player nwere. Iji mee nke a, pịa bọtịnụ ihe nchọgharị ahụ na aka nri aka nri ma gaa mpaghara "Ntọala".
Na windo nke meghere, ị ga-agbadaru na njedebe nke ibe ma pịa bọtịnụ ahụ "Gosi ntọala dị elu".
N'ime ihe ndị ọzọ pụtara pụtara ịchọta ngọngọ ahụ "Ozi Nkeonwe"ebe ị kwesịrị ịpị bọtịnụ ahụ "Ntọala ọdịnaya".
Mgbanwe ohuru ga-apụta na ihuenyo nke ịchọta ngọngọ ahụ. "Flash". Nke a bụ ebe a na-ahazi Flash Player ngwa mgbakwunye. Na ngọngọ a, ị nwere ihe atọ:
Kwe ka Flash na-agba ọsọ na saịtị niile. Ihe a pụtara na saịtị niile nwere Flash ọdịnaya ga-ebido ọdịnaya a na-akpaghị aka. Taa, ndị na-emepe ihe nchọgharị weebụ adịghị akwado ịkọ ihe a, n'ihi na nke a na-eme ka ihe omume ahụ ghara ịdị mfe.
Chọọ ma na-agba ọsọ naanị ọdịnaya dị mkpa Flash. A na-edozi ihe a na ndabara na Yandex. Nke a pụtara na ihe nchọgharị weebụ n'onwe ya kpebiri ma ọ ga-amalite ọkpụkpọ ma gosipụta ọdịnaya dị na saịtị ahụ. Ọ na-ejide n'eziokwu na ọdịnaya ịchọrọ ịhụ, ihe nchọgharị ahụ nwere ike ọ gaghị egosipụta.
Block Flash na saịtị niile. Akwụsịtụchala ọrụ nke Flash Player ngwa mgbakwunye. Nzọụkwụ a ga-echebe nchedo gị, ma ị ga-achụ àjà ahụ bụ na ụfọdụ ihe dị egwu ma ọ bụ vidiyo na Ịntanetị agaghị egosipụta.
Ihe ọ bụla ị họọrọ, ịnwere ohere ịmepụta ndepụta nke ndị ọzọ, ebe ị nwere ike ịmepụta ihe nke Flash Player maka otu saịtị.
Dịka ọmụmaatụ, maka ihe nchedo, ịchọrọ iwepu Flash Player, ma, kaatuatu, na-ahọrọ ịnụrụ egwu na netwọk mmekọrịta WKontakte, nke chọrọ onye ọkpụkpọ a ma ama. N'okwu a, ị ga-achọ pịa bọtịnụ ahụ. "Nwepụ Njikwa".
A ga-egosipụta nchịkọta dị iche iche nke nkwụsị nke ndị mmepe nke Yandex Browser ga-egosipụta na ihuenyo. Iji tinye ebe nrụọrụ weebụ nke aka gị ma nye ya ihe ọ bụla, họta ọrụ weebụ ọ bụla dị na otu click wee dee URL nke saịtị ị nwere mmasị na (vk.com na ihe atụ anyị)
N'ịkọwa saịtị ahụ kpọmkwem, ọ dị gị mkpa inye ya ọrụ maka ya - ime nke a, pịa bọtịnụ dị n'aka nri iji gosipụta listi mmapụta. Atọ atọ dị gị aka n'otu ụzọ ahụ: kwere, chọta ọdịnaya na igbochi. N'ihe atụ anyị, anyị na-ama akara oke "Kwe ka", mgbe ị na-azọpụta mgbanwe site na ịpị bọtịnụ ahụ "Emere" ma mechie windo.
Taa, ndị a niile bụ nhọrọ maka ịmepụta Flash Player ngwa mgbakwunye na Yandex nchọgharị. O kwere omume na ohere a ga-apụ n'oge na-adịghị anya, ebe ọ bụ na ndị mmepe nke ihe nchọgharị weebụ a na-ewu ewu echewo ogologo oge ịhapụ nkwado maka nkà na ụzụ a iji kwado nchebe nchọgharị.
https://termotools.com ig.termotools.com © Kaadị ebe nchekwa 2019